Global Voices teny Malagasy » Tsy hita tany Venezoela i Luis Carlos Diaz, mpanao gazety nomerika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Marsa 2019 5:45 GMT 1	 · Mpanoratra Ellery Roberts Biddle Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
“Aiza i Luis Carlos?” Sarin'ny fanentanana ho an'ny daholobe amin'ny aterineto nozarain'i Provea. Asehon'izy ireo ao amin'ny sary ny fotoana farany niresahana taminy sy ny fotoana farany nanaovany sioka.
[Vaovao farany avy amin'ny mpamoaka ny GV teny malagasy (Jentilisa): Araka ny siokan'i Renata Avila dia efa navotsotra ity namanay, namantsika ity, niasa ny diplaomasia]
Ny takarivan'ny 11 Martsa, nisioka ilay mpaneho hevitra ara-politika Naky Soto sady vadin'ilay mpanao gazety mpikatroky ny fampitam-baovao Venezoeliana Luis Carlos Diaz fa tsy hita nandritra ny adiny dimy ity farany. [Vaovao farany] Nitatitra ny Fikambanan'ny Mpiasan'ny Gazety (amin'ny teny espaniola, ny SNTP) fa notanan'ny Sampa-pitsikilovana Venezoeliana (SEBIN) i Luis Carlos :
VAOVAO MAIKA: Nanamafy ny Vaomieran'ny Sebin fa notanan'ny polisy i Luis Carlos Díaz, mpanao gazety. Nambanan'izy ireo fitaovam-piadiana ilay mpanao gazety [sady mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Gazety] Marco Ruiz, Luz Mely Reyes ary Federico Black.
Ora vitsivitsy talohan'io, nisioka i Soto fa tsy hita nandritra ny ora dimy i Luis Carlos Díaz:
Ry namana isany: Tsy azoko antso intsony i @LuisCarlos nanomboka tamin'ny 5:30 tamin'ity tolakandro ity, raha nilaza tamiko izy fa hody any an-tranony haka aina satria hanao fandaharana manokana ao @Unionradionet izy manomboka amin'ny 10: 00 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina.
Nandeha bisikileta i @LuisCarlos, fa nanomboka tamin'ny 5:30 dia tsy naheno na inona na inona avy aminy intsony aho ary:
– tsy tany amin'ny onjam-peo izy
– tsy tany an-trano izy
– tsy nisioka izy
– tsy namaly antso izy
– tsy namaly hafatra SMS na hafatra WhatsApp izy
[Vaovao farany] Nitatitra mivantana  avy eo i Luz Mely Reyes avy any an-tranon'i Díaz raha nisava ny tranon'i Diaz sy Soto ny ekipan'ny SEBIN ary naneho hevitra momba ity zava-nitranga ity ihany koa ny Fikambanan'ny Mpiasan'ny Gazety :
VAOVAO MAIKA Amin'izao fotoana izao, amin'ny 3:30 maraina, tonga tao an-tranon'ny mpanao gazety sady mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Luis Carlos Díaz, izay tsy hita nanomboka tamin'ny 5:30 hariva ny vaomiera avy ao amin'ny Sampa-pitsikilovana.
Nanatevin-daharana ilay fanentanana tamin'ny alàlan'ny tenirohy #DondeEstaLuisCarlos  (Aiza ​​i Luis Carlos?) izay lasa lohahevitra malaza ao amin'ny tontolon'ny twitter any Venezoela amin'izao fotoana izao ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona sy ny fikambanana mpiaro ny fahalalaham-pitenenana hafa.
Mpanao gazety sady mpiaro ny zon'olombelona sy ny fahalalaham-pitenenana izay fanta-daza sy ankasitrahana indrindra ao Venezoela ary any ivelany i Díaz noho ny fanehoan-keviny sy ny tsikera nataony tamin'ny governemantan'i Nicolas Maduro. Niara-niasa efa hatry ny ela tamin'ny vadiny Naky Soto izay fanta-daza amin'ny fanehoan-kevitra ara-politika ihany koa izy ary namokatra lahatsary an-tserasera  sy fandaharana tamin'ny onjam-peo mifantoka amin'ny resaka politika sy ny zon'olombelona ao Venezoela. Niasa ho mpanabe sy mpampiroborobo ny famoronana ny sehatry ny fampielezam-baovaon'olo-tsotra sy ny tetikasan'ny fampitam-baovao tsy miankina ihany koa izy. Anisan'ny vondrom-parahamonina ato amin'ny Global Voices  mihoatra ny folo taona ihany koa i Díaz .
Ho ahy, olona mamirapiratra i Luis Carlos, mahafantatra tsara ny vaovao sy ny tambajotra ato amin'ity Venezoela antsika mikorontana ity. Nahavita nifandray tamin'ny fiarahamonina izy (avy amin'ny tsikera mankany amin'ny sehatra ara-kolotsaina).
Vao andro vitsivitsy mialoha ny nanjavonany, nampiseho ny lahatsary iray momba ny fandaharana vao haingana nataon'i Diaz ny fandaharan'ny fampahalalam-baovaom-panjakana Con el Mazo Dando. Nilaza ny mpanolotra ny fandaharana, Diosdado Cabello, mpanao politika, fa nanampy tamin'ny fanaparitahana ny fahatapahan'ny herinaratra manerana ny firenena  izay namela ny Venezoeliana niaina tao anaty haizina nandritra ny 24 ora ny 7 sy 8 Martsa i Diaz.
Tsy misy anefa ny porofo hanohanana izany.
Nanomboka tamin'ny 5:30 hariva, tsy fantatra ny toerana misy an'ilay mpanao gazety Luis Carlos Díaz . Voampanga ho “manao fandrisihana toy ny fasista” izy tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter-n'ny “Con el mazo dando”.
Iray amin'ireo endrika miavaka indrindra amin'ny asa fanaovan-gazetin'ny mpanohitra any Venezoela ny namantsika @LuisCarlos . Andro vitsy lasa izay, nikendry an'i LC niaraka tamin'ny fampielezan-kevitra firaisana tsikombakomba izay nampifandray azy tamin'ny “fahatapahan-jiro manerana ny firenena” efa nomanin'i Etazonia ny fandaharana #conelmazodando an'i Diosdado.
Raha nandeha tsy nisy vaovao marim-pototra ny fotoana dia nanatevin-daharana ny fanentanana izay niatomboka tamin'ny fikarohana tao amin'ny foiben-toeran'ny Sampa-pitsikilovana (SEBIN) ny Fikambanan'ny Mpiasan'ny Gazety (amin'ny teny Espaniola, SNTP). [Vaovao farany: nilaza izy ireo tatỳ aoriana  fa nohazonina mialoha fotoam-pitsarana i Diaz ]:
Efa ho adiny fito izay i Luis Carlos Díaz no tsy hita. Mpanao gazetin'ny Unión Radio Noticias i [Díaz] ary mpikatroka mpandala ny zon'olombelona izy. Ato amin'ny foiben-toeran'ny SEBIN izahay ary nandà ny fihazonana azy [ao amin'ny fonja] izy ireo.
Nanambara kosa i Vladimir Villegas, mpanao gazety, fa notanan'ny tafi-panjakana izy:
Nampahafantarina anay fa notanan'ny herim-piarovana i Luis Carlos Díaz, mpanao gazety ao amin'ny @Unionradionet. Maneho ny ahiahinay ny amin'ny momba azy izahay. Mitaky vaovao momba ny toerana misy azy sy ny fanajàna ny zony izahay.
Maneho firaisankina miaraka amin'i Luis Carlos, ny fianakaviany, ary ireo mpanao gazety rehetra tsy miankina hafa miasa mba hahafahana manao tatitra avy any Venezoela ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices. Maniry ny hiverenany soa aman-tsara araka izay haingana izahay ary hanohy hanavao ity vaovao ity araka ny fivoarany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/13/136024/
 Nitatitra mivantana: https://www.pscp.tv/w/1rmxPQgBkYEKN
 namokatra lahatsary an-tserasera: https://www.patreon.com/luiscarlosdiaz
 vondrom-parahamonina ato amin'ny Global Voices: https://globalvoices.org/author/luis-carlos-diaz/
 fahatapahan'ny herinaratra manerana ny firenena: https://globalvoices.org/2019/03/08/blackout-in-venezuela-how-long-will-it-last/